March 5, 2021 Xuseen 16
Puntlandtimes (Boosaaso)-Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo diyaarad gaar ah ka qaaday magaalada Garoowe ayaa maanta si deg deg ah u gaarey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kadib weerarkii xalay ee xabsiga dhexe.
Garowe to Bosaso iyo diyaarad
Laakiin armay igu SAWIRTA la sheego ka walax tahay?! Aad baad iiga qoslideen.
Si kastaba, waxa dad badani qabaan, haddii hal xanbad (YAANYO) kor loogu rido, miriqdiisa lamma arkaayo; public toilet-kuu orod ku galaayaa. Niman yahaw ciyaarta naga daaya.
Deni runti isaga dayacay amniga puntland intii u Ku mashqulsana wax an puntland Dan ugu jirin sida g.gedo iyo mucaaradka dowladda federalka.haddi ay dhab noqoto alshababki Ku xidhnaa jeelka inay baxsadeen waxay ceeb iyo wajigabax Ku tahay saciid deni iyo kooxdisa.
Canaasiirtii ciyaalka ini Xarmaajo ee agoonta waxay maanta ku faraxsanahiin falkii argagixisada fadhigeedu yahay villa wardhiigley ay ka fuliyeen xabsiga Bosaso. Waxaan u sheegayaa cadowga Puntland ee canaasiirta Xarmaajo in Puntland iskaga filan tahay cadow kasta oo kusoo duula dhabarkana ka jabiso, taariikhda laguma hayo cadow ka guulaysta Puntland. Dhuusada yar ee lagasoo abaabulay halkii lagasoo abaabulijiray ee villa wardhiigley Puntland dhiiri gelin wayn ayay u tahay waxaad ogtihiin in argagixisada shabab hada xaruntooda ugu wayni tahay villa wardhiigley Fahad iyo Xarmaajo yihiin kuwa ku laban argagixisada soomaaliya. Guul ciidanka Puntland ee geesiyada ah guul madaxda Puntland ee qiyamka iyo sharafta leh waan hubaa in dharbaaxo kulul ay ku dhicidoonto cadowga Puntland nooc kasta uu yahay iyo midab kasta uu leeyahay. Ilmo Xarmaajo tacsi ayaa idiin taal aabihiin Xarmaajo iyo argagixisadiisa birtaa la marindoonaa.
Tuute la xirto wax micna ah ma laha.
Waa mid ay isga daydaan madaxda federaalka iyo gudoomiyaalka gobolada( Governors) wallow aysan jeclayn magacooda saxa ah.
Marwalba oo la waraysto runta ka ma sheegaan xaalad amni ee dhabta ah,tussale Warsysigii uu danbeeyey ee Wariye Hereri ee Tv Universalwaxs uu sheegay in amaanka Puntland oo aad u fiicanyahay, waxay ahay in uu yiraahdo waxaa jira weli watRo ambi oo ay wadaan argagixisado.
Deni waxa uu u guuldaraystay dhamaan wixii laga sugay markii loo doortay madaxa maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya,waxaa uu ku mashquulay in uu ka shaqeeya in aan heshiis laga gaarin arimaha ku saabsan in doorasho ay si dhaqsiya ah loo qabto.
Deni arimaha Puntland ayaad ku fashilantay ee bal haddii ay jiraan la taliyaal wanaagsan bal iyaga talo waydii oo waado cusub inta kuu hartay ku dhaqaaq.
Dhibaatada tadan waa mid ay kula wadaagaan maamulada kale iyo dowlada federaalka ah,waayo marna si run ah arimaha amaanka si dhab ah loo ma maareeynin.
Gunaanadkii in hab beeleed aan shaqayn karayn lago socdo,iyo in hadba shaqsiga noqda madaxa maamulka Puntland uu u dhaqmo in uu kaligiis awooda oo dhan maamulo sida caada u noqotay Puy horumar lama gaarayo.
Sharcigo ha sareeyo.
Guul,nabad,cadaalad Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan
@ Ahmed Adeer Alshab ka jeelka ka baxsaday ee aad sheegtay yaa soo qabtay awal? Bosaso oo aysan amni ka jirin lagana guuray yaa soo celiyay amnigeeda? Ciidan kii soo qaban jiray ee dhabarka ka jabin jiray waa joogaan, Madaxwaynihii gacanta birta ah ku qabtay amniga Puntland guud ahaan gaar ahaan Bosaso iyo Gaalkacayo waa joogaa waana ku kalsoonahay inuu cagta marindoono canaasiirta argagixisada sidii looga bartay. Ahmed hadii cadowgaagu yahay mid kugu dhex jira waa suuragal inay mar mar dhagax soo tuuraan waase u dhiirigalin ciidanka Puntland ee geesiyada ah. Puntland waligeed cadow geedu ma guulaysan dhabarkuuna ka jabaa. Argagixisada waa la cirib tiraya hoog iyo halaag ayaana u danbayndoonaa InshAllah. Waa iska dhaqan lagu yaqaan argagixisada inay hadba meel gaadmo ku galaan ama wax ku qarxiyaan, waxaan ognahay inta jeer ee ciidanka Puntland ay fashiliyeen isku day dhagarta argagixisada khaasatan Bosaso waxayna mudanyahay in looga mahadceliyo runtii. Ugu danbayn Puntland way ka guulaysan cadowgeeda noocyada badan xaruntiisuna tahay villa wardhiigley iyo canaasiirta leef leefka ka qaata cadaab iyo ciqaab adag ayaa Puntland u yaal kooxahaas .
Faisal. Beena waas baatayah. Amino xumo iyo sixir barar Deni kuma horay. Waan fulay doqon Ah Deni Markaa waxba Farmaajo ha eeadaynina
Deni waa fuley bal isagoo ciidan laxaadle heysta maxaa ku qasbey in uu diyaarad u raaco Garowe iyo Bosaaso.
Waxaan fahmiwaayey in uu Galkacayo iyo Dhuusamareeb dhulka maro oo weliba ka khatar badan mise xilligaas waxaa la socdey ciidamada Galmudug oo kaga kalsoon yahay kuwa Puntland.
War ninkaan caloosha weyn oo dhidid iyo jarees isku daro markuu ka hadlayo Waxyaabaha qaarkood ha iscasilo.
Garowe iyo Boosaaso waxaay isu jiraan inta aay isu jiraan, Kismaayo iyo Muqdisho oo ah 500km.
Marka,Deni haddiiba uu heli karo Diyaarad qaado iyo Airport uu ka dego, maxaa ku qasbaya socod maalin qaadanaya oo daal badan? Mase dhulka inta uu isu jiro ayaadan kala aqoon?
Garowe iyo dhuusa-mareeb waa masaafo ka yar 350km, dhibna ma leh in dhulka loo maro, haddii Mooryaantiina laga badbaado! Kkkk
Si deg deg ah inu madaxweynuhu Bosaso Ku gaaro ayuu diyaarad u qaatay,xirashada tuutahana waa in muujiyo in u guntaday ammaanka Bari iyo guud ahaan Puntland,deg degna u hawl geliyo ciidanka si u cirib tiraan argagixisada kusoo duushay Bosaso.
Maalin ka hor ayaa maamulka Bari ka shireen ammaanka gobolka,kana digeen hub lala dhex maro magaalada iyo maandooriyaha,ammaankana in fiican yahay sheegeen,waxan ayaana dhacay!!!
Miyaanay jirin wardoon soo gudbin kara khataraha imaan kara,unasoo gudbiya laamaha amniga.
Habacsanaan amni ayaa jirta,waana in la xaliyaa,lana adkeeyaa amniga Isha dhaqaalaha Puntland iyo dhamaan Puntland,xididadana loo siibo argagixisada iyo ganacsatada iyo cidii kaleba ee gacanta siiyaba,looguna galo buuraha ay kasoo duulaan.
Puntland kuma cusba hawshaan oo kale, horey weeraro ka ka culus ayaa lugu soo gaadey, Shabaab uu aan wax reeban ayaa dagaal ku soo qaadey Garacad, Karmaal iyo Eyl waana la ogaa wixii ka raacey, harkii ayaa lagu leefey. MW Deni dad iyo dal ayuu matalaa, waa inuu qaataa tala kasta oo Amnigiisa ku saabsan. Dayaaradse uu qaateyna waa mid ka dhalatey TALADDA gudiga amnigs, Boosaaso iyo Garowe waa ilaa 500km, haddisa ayssn ka badneyn.!! Dadka waxaa jooga Ismaqiiqe farmaajo oo Baarood haq ka siisey, Senator Cabdi Xaashi oo agtaana uusan noocsan. Puntland raggii dhisey rag ay dhaleen ayaa jooga, wexeyna diyaar u yihiin DIFAACEEDA.
Habar indho la baa gabar ayeeyo utahay kutiri ayeeyo haguursan nin naaxey iyo nacas labaduba waa cadow dumar GOD SAVVE MAJEERTEEN
@Faysaloow, Deni dad kama xigtid. Hadii cid ay laaluush iyo jeeb ka la gashto, adaa ah. It’s very clear in Deni uu ku fashilmay hogaaminta PL. Shacab ka reer PL adi iyo Deni waa ka wayn yahay. Deni aad buu uga gaabshay wixii reer PL u igmadeen. Hadaad adigu degan tahay qurbaha oo cayr ku nooshahay, dad ka reer PL kuma noola. Caqligaaga Villa Somalia ku mashquushan iska daa oo taada toosiso. Golaha shacab ka bay PL matalaad ku leedahay, that is it. Iska soo caytan.
Muddo laga joogo bil waxaa Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni soo wacay wasiir daakhiliga Somaliland Maxamed Kaahin Axmed isagoo ka dalbadey Madaxweynaha Puntland in uu siidaayo afar nin Isaaq ah oo ku xiran Puntland. Wuxuu Kaahin u sheegey Deni in raggaas lagu heesto in ay ka tirsan yihiin shabaab laakiinse ay yihiin rag ganacsato ah oo laga qabqabtey Bosaaso.
Deni wuxuu ugu jawaabey in uusan awood u laheen uu ku siidaayo raggaas maadaama ay ku xiran yihiin dembiyo waaweyn.
Kaahin oo ka caroodey madaxweyne Deni wuxuu uga jawaabey ” haddii aadan laheen awood aad ku siigeyso rag aad iska xirateyn waxaad ogaataa in aadan laheen awood aad ku siiheysato”.
Deni degdeg buu telefonkii ku demiyey , ka dibna wixii isaga iyo Kaahin dhexmarey wuxuu lawadaagwy rag dhawr ah isaga markaas la joogey…
Deni iyo raggii la joogey midnah waxba kama soo qaadin handadka iyo akhlaaq darrada uu Kaahin kula hadley Madaxweynaha Puntland..
Hadda muxuu tuuto ka gashanayaa?
Walee mooryan waa mooryan war NIN yahow orod aad website mooryanta
Mahamed Jaama says:
horta waxan tacsi u dirayaa shahiidiintii ku dhintay mesha waxana ilaahay uga baryaya janadii fardowsa in uu ilaahay geeyo.mid labaad puntiland nin necb iyo mid kalaba waxba ka qaadi mayo